Appinions: Onye Bu, Ihe na Kedu nke Nwepu Ahia | Martech Zone
Appinions: Ndi Onye, Gini na Kedu nke Ire Ahu ahia
Platformsfọdụ teknụzụ azụmaahịa na-adị ka mmanya dị mma ka ha na-aga n'ihu ịmeghe nsogbu ndị na-eme ndị ahịa ahịa. Ọchịchọ ọ dị ka otu n'ime nyiwe ndị ahụ. Mgbe anyị mere ọkwa na afọ ole na ole gara aga, ọ bụ obere ikpo okwu dị mma nke nyere mmetụta site na isiokwu na mmadụ - bara ezigbo uru n'oge ahụ. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ọ bụ usoro mgbasa ozi zuru ezu nke nwere ike inyere aka ịmepụta usoro ọdịnaya maka ụlọ ọrụ iji nweta ikike na ahịa ndị ha chọrọ ịchụso.
Laa azụ n'ụbọchị, ahịa na ahịa dị mfe. Naanị ozi onye ahịa nwere ike ịchọpụta bụ nke ị na - achịkwa - nke mbụ naanị site na mgbasa ozi gị (tupu ịntanetị) wee banye na weebụsaịtị gị. Ahịa nwere ike ịzigharị, mejupụta ozi ndị ọzọ, ma mechie azụmahịa. Naa, nke ahụ kpam kpam. Ndekọ ọnụ ọgụgụ nso nso a gosipụtara 60% nke ndị na-azụ ahịa njem na-eme tupu onye ahịa erutekwute gị.
Na 60% bụ ihe Appinions kpọrọ ahia a na-achịkwaghị achịkwa - ụdị amaghị ihe ndị ahịa ha nwere ike ịgụ, ebe ha na-agụ ya, onye na-ekwu ihe, kedu nke ọtụtụ nde echiche banyere akara gị ebe ahụ dị mkpa, wdg. Ruo ugbu a! - Appinions na-enye gị nghọta ahụ ma na-ahapụ gị mmetụta ndị ahịa ọhụrụ a metụrụ aka.
Maka isiokwu ọ bụla, Appinions na-ebupụta onye na-ekwu ihe, yana nke echiche ndị ahụ dị mkpa n'ezie. Appinions na-abanye ọtụtụ iri nde akwụkwọ kwa ụbọchị, ma nyochaa onye ekwu Kedu banyere nke isiokwu, dabere na afọ nke Cornell eke asụsụ nhazi nnyocha. Ihe data a ruru na mmeghachi omume n'ịntanetị, na-anọghị n'ịntanetị, isi mmalite akụkọ, telivishọn, na mgbasa ozi mmekọrịta.
Dịka onye na-azụ ahịa, ịnwere ike ịme data ahụ ọtụtụ ihe ukwu. Nwere ike ịgakwuru ndị ahụ na-eme ihe ike ma mee ka ha mara ngwaahịa gị. Ma ọ bụ ị nwere ike iji data isiokwu (ya bụ, ihe ndị mmadụ na-ekwu maka nke ahụ na-ada ụda) iji duzie usoro ịzụ ahịa ọdịnaya gị. Ma ọ bụ ị pụrụ ịchọ ịchọta ọkà okwu ga-eme ihe omume. Ma ọ bụ ị pụrụ iji tụọ ịga nke ọma nke a ngwaahịa igba egbe, wdg…
Nyocha gbasara oghere
Profaịlụ Influencer zuru ezu
Tags: ochichiasọmpi mmetụta dataahịa ahịausoro ihe eji ere ahịaọdịnaya ọdịnayaechiche nyochadashboard isiokwu
Julaị 19, 2011, elekere 10:05 nke ehihie
Nke a na-adọrọ mmasị. Aga m elele ya. Ekwenyere m na echiche gị gbasara Klout.
Ọhụụ ahụ mara mma nke ukwuu!
M nyochara wee nwalee na a otutu mmetụta ahịa nyiwe mgbe co-ede akwụkwọ mmetụta Marketing: Otu esi Mepụta, Jikwaa, na atụ Brand Influencers afọ gara aga, na mgbe niile na m obi ike na-ekwu na Appinions bụ otu n'ime ndị kasị keukwu Enterprise nyiwe dị. Akwadoro nke ukwuu.
Ọgọstụ 7, 2014 na 2:01 ehihie
Sam - daalụ nke ukwuu maka ndetu. Maka ndị chọrọ ịgụ akwụkwọ na Marketing Mmetụta - jide n'aka na ị ga-ebuli akwụkwọ Sam! Mmetụta Marketing: Otu esi emepụta, jikwaa, na tụọ ụdị mmetụta n'ahịa mgbasa ozi Social Media (Que Biz-Tech)